Incebreaker: Iimidlalo zokuThetha ngeeNtetho ezintsha
Umdlalo we-Icebreaker wezaziso
I-Icebreaker Imidlalo yeeNgcaciso
Amaqela abantu abangayaziyo ahlangane onke amaxesha kwiintlanganiso, iindibano, ii-workshop, amaqela okufunda, iiprojekthi kunye nazo zonke iintlobo zeminye imisebenzi yeqela. I-Icebreaker imidlalo iyafezekiswa kwezi meko kuba 'iqhekeza iqhwa' kwaye inceda bonke abantu kwiqela bafunde omnye nomnye kangcono. Oku kunokubaluleka ngokukhethekileyo kumaqela aya kusebenza kunye ngaphezulu kweeyure ezimbalwa.
Kukho iindlela ezininzi zokuba abantu bazi amagama abo omnye-sonke sasiye kwisiganeko apho sasicelwa ukuba sigqoke itekisi yamagama-kodwa iqela lebhola le-icebreaker imidlalo lidla ngokubandakanyeka. Injongo yomdlalo we-icebreaker ukugcina izethulo ezimnandi kunye nokukhanya kwaye zikuncede ukuphepha ukungahambi kakuhle okungenakwenzeka xa ubeka iqela labantu abangazihambi kwigumbi ndawonye.
Kule nqaku, siza kuhlolisisa imidlalo emininzi yentetho engasetyenziselwa njengamaqhekeza amaqabunga amaqela amancinane okanye amakhulu abantu abangaziwayo okanye abantu abangasebenzela kunye kodwa abangazi kakuhle. Le midlalo yenzelwa izethulo ezisisiseko. Ukuba ufuna imidlalo ye-iceberaker ekunceda amalungu eqela asebenze kunye, kufuneka uhlolisise imidlalo yeqela lokuqhaqha .
Ncokola Umdlalo we-Icebreaker 1
Kule ntetho ibonisa umdlalo we-icebreaker, uya kufuna ukuqala ngokuqhekeka iqela lakho ngeebini.
Buza umntu ngamnye ukuba afune indawo yangasese kunye ne-intanethi naye.
Omnye umntu kufuneka athathe indima yentetho yokubonisa intetho, ngelixa omnye umntu kufuneka athathe inxaxheba kwindwendwe yokubonisa intetho. Umninimzi wokubonisa intetho kufuneka abuze imibuzo yokuvakalisa intetho ngeendwendwe ngenjongo yokufumana iimbali ezimbini ezithakazelisayo ngeendwendwe. Emva koko, amaqabane kufuneka atshintshe indima aze aphinda umsebenzi.
Emva kwemizuzu embalwa kunye nokuxoxa okuninzi, unokucela ukuba wonke umntu aqokelele kwiqela elikhulu kwakhona. Xa wonke umntu edibeneyo, umntu ngamnye unokubonisa ngokufutshane iinkcazo ezibini ezithakazelisayo abazifundileyo malunga neqabane lawo kulo lonke iqela. Oku kuya kuvumela wonke umntu ithuba lokuba azi kakuhle.
Ncokola Umdlalo we-Icebreaker 2
Ukuba awunayo ixesha lokuhlukanisa iqela ekusebenzisaneni, unokwazi ukudlala umdlalo wokubonisa umdlalo. Konke okumele ukwenze kukukwenza utshintsho oluthile kwimithetho. Ngokomzekelo, unokukhetha elinye iivolontiya ukuba usebenze njengomboniso weentetho kunye nodliwano-ndlebe nomntu omnye ngexesha eliphambi kweqela lonke. Oku kuphelisa isidingo sobambiswano kunye nenxalenye 'yokwabelana' yomdlalo. Unokunciphisa umdlalo ngakumbi ngakumbi ngokunciphisa umvolontiya kumbuzo omnye. Ngale ndlela, intetho nganye ibonisa isivakalisi ibuzwa umbuzo omnye endaweni yemibandela emininzi.
Ngaba Ufanele Uhambe KwiKholeji elincinci okanye kwiYunivesithi enkulu?
IYunivesithi yaseNorth Carolina kwiGreensboro (UNCG)
Qaphela kwakhona ukutshala iMimosa kwiYard Yakho